လိင်စိတ်နိုးကြွမှုအားနည်းခြင်းဟာ အိမ်ထောင်ရေးသာယာမှုနဲ့ အမှန်တကယ်ဆက်နွယ်မှုရှိနေလား? - The Lifestyle Myanmar
လိင်စိတ်နိုးကြွမှုအားနည်းခြင်းဟာ အိမ်ထောင်ရေးသာယာမှုနဲ့ အမှန်တကယ်ဆက်နွယ်မှုရှိနေလား?
March 12, 2020 By life_admin Featured, Knowledge
အမျိုးသမီး နာမည်က Franziska ပါ။ သူမမှာ လိင်စိတ်နိုးကြွမှုအားနည်းတဲ့ရောဂါဖြစ်နေပါတယ်။ ညတော်တော်များများမှာ သူမလိင်ဆက်ဆံဖို့ စိတ်မပါနေခဲ့ပါဘူး။ဒါ့အပြင် သူမရဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာလည်း မသာယာနေပါဘူး။ ဒီနှစ်ခုက တကယ်ပဲ ဆက်စပ်မှုရှိနေတာလာ။
” တချို့ညတွေ ကျွန်မအမျိုးသားက ကျွန်မကို လိင်ဆက်ဆံဖို့ပြောလာရင် ကျွန်မလိုလို မဖြစ်နေခဲ့ပါဘူး။ တကယ်ရော လိင်ဆက်ဆံချင်နေရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးနေမိတယ်။ ကျွန်မ အဲ့လို ယောင်ဝါးဝါးလုပ်နေတာနဲ့ပဲ အမျိုးသားနဲ့စကားအခြေအတင် ဖြစ်ကြပြန်ပါတယ် ” လို့သူမက ပြောပါတယ်။ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူမဟာ အိမ်ထောင်သက်တမ်း အနှစ် ၂၀မှာ ကလေးနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ သူမ အမျိုးသားက လိင်စိတ်ပြင်းထန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမကတော့ အကြိမ်တော်တော်များများမှာ လုံးဝစိတ်မပါဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါဟာ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုမှာ တော်တော်လေး ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ဖြစ်နေပါတယ်။ တခါတရံကျွန်မအမျိုးသားက လိင်ဆက်ဆံဖို့ပြောလာတဲ့အခါ လိုက်လျောမိပါတယ်။ စိတ်ကမပါပါဘူး။ တချို့အခေါက်တွေမှာ ငြင်းတောင်ငြင်းမိပါတယ်။ အလိုလိုထွက်လာတဲ့ ငြင်းဆိုချက်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်အခြေခံကြောင့်ပါ။
ကျွန်မတို့ ဘယ်တုန်းက နောက်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့လဲ ၊ နောက်တစ်ကြိမ်ဆက်ဆံဖို့ စောနေသေးလား ဒါမျိုးတွေပေါ့။ ကြာတော့ လိင်ဆက်ဆံတာကို သာယာမှုလို့မမြင်ပဲ တာဝန်တစ်ခုလိုမြင်လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်ဖိဆီးမှုတွေ အငြင်းအခုံတွေလည်း ပိုများလာပါတော့တယ်။
ဒါကို ဆေးပညာအရ လိင်စိတ်နိုးကြွမှုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း (Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုရောဂါခံစားနေရသူတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ နှိုးဆွမှုရှိရှိ စိတ်မပါတာမျိုးအထိတောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Franziska ဟာ စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တာကြောင့် သူမအတိတ်က ခံစားရတဲ့ရောဂါနဲ့ပတ်သတ်ပြီးကုထုံးတွေရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် ထူးခြားတဲ့ရလဒ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ကြာလာတော့ သူမကို သူမ မပြည့်စုံသလို ခံစားရလာပါတယ်။ သူမချစ်တဲ့အမျိုးသားရဲ့ အလိုကိုမလိုက်နိုင်သလို စိတ်အားငယ်လာမိပါတယ်တဲ့။
သူမတို့လင်မယားဟာ လိင်စိတ်နိုးဆော်တဲ့အရုပ်တွေနဲ့ ဆေး တွေမှီဝဲခဲ့ကြပေမယ့် အကျိုးမထူးခဲ့ပါဘူး။ “ တခါတလေ သူမ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နောင်တရမိပါတယ်။ အိမ်ထောင်မပြုမိရင်အကောင်းသားလို့။ အိမ်ထောင်မရှိ လူလွတ်တစ်ဦးသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို လိင်အပျော်အပါးကိုမေ့ထားပြီးအောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်ပြီပေါ့” လို့လည်း သူမကပြောပါသေးတယ်။
ဒါဆို ဒီပြသနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ကြတော့ဘူးလား???
” အဲ့လိုလဲ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ငါဟာ လိင်စိတ်မဖြစ်တဲ့သူမို့မပြည့်စုံဘူးလို့ လုံးလုံးမတွေးသင့်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုရှာပါ။ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုလာပြတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲမှာ အမျိုးသမီးက လုံးဝလိင်စိတ်မရှိပါဘူး။ သူမဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်ထင်လဲ။ သူမလက်တွဲဖော်ကို တခြားအမျိုးသမီးနဲ့ပေးအိပ်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင်းလင်းလင်းပေါ့။ တစ်ယောက်အလို တစ်ယောက်ဖြည့်ပေးသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်ဖြစ်တာတွေနည်းလာတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပိုမိုဂရုစိုက်လာကြပါတယ်။ ဒါဟာလည်းဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပါ” လို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်သူ Wolf က ဆိုပါတယ်။
Writer- ZWP ( The Lifestyle Myanmar )
Source – DW
လိင်စိတ်နိုးကြွမှုအားနည်းခြင်းဟာ အိမ်ထောင်ရေးသာယာမှုနဲ့ အမှန်တကယ်ဆက်နွယ်မှုရှိနေလား
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော် ပိတ်သိမ်းလိုက်ရပြီ
စာမေးပွဲစောင့်ကျောင်းဆရာမကို လူသုံးဦးက ရိုက်နှက်ပြီး ဆိုင်ကယ်လုယူမှုဖြစ်ပွား
© The Lifestyle Myanmar 2021 The Lifestyle Myanmar2021 • Themaga powered by WordPress